BARE Sharmarke Cabdullahi Cali: DHABARJABKA DP WORLD – Radio Daljir
Maarso 12, 2018 5:55 g 0
Kullankii uu maanta yeeshay Aqalka hoose ee xildhibaanadda DFS ayaa lagu go’aamiyay heeshiyada DP World ay la gashay Somaliland iyo Puntland mid waxba kama jiraan ah, waxay isla goobta ku ansixiyeen Xeerka Dhawirda Gobonimadda iyo Midnimadda Geyiga Soomaaliyeed. Arrintaas waxay ummadda Soomaaliyeed uga dhigan tahay in dawladu tabarkasta ha yeelatee ay tahay mid ka duulasya rabitaanka shacabkeeda sido kelna waxay fariin adag udiraysaa Dawlada Isutaga Imaaraadka Carabta.
March 2006 ayaa sidaan oo kale labada aqal ee Dawlada Maraykanku waxay ka joojisay shirkada DP world lix dekadood ay maamuli jirtay oo ku yaalay intooda badan Waqooyiga Maraykanka. Sidoo kale xildhibaanaddu waxay go’aamiyeen dekadaha laga wareejiyay DP World in aan loo dhiibi karin shirkad wax xiriiri ah la leh Dawlada Isutaga imaaraadka iyo Shirkada DP World. Wakhtigaas Dawlada Maraykanka waxaa hogaaminayay Madaxwayna Bush oo ay aad saaxiib dhaw u ahaayeen Imaaraatka wuxuu isku dayay inuu ka difaaco DP World xildhibaandda diidan inay shirkadu sii maamusho dekadaha ay gacanta ku haysay balse arrintaas waxay kaga jawaabeen “waan ognahay Xirirka dhaw ee labada dawladood ka dhexeeyo balse arrintaan dani uguma jirto dadka iyo dalka Maraykanka” sidaas darteedna si khasab ah ayaa looga wareejiyay DP World dekadihii ay maamulaysay. Xildhibaanddii diidana joogitaanka DP World cariga maraykanka ma aysan faahfaahin sababta dhabta ah ay kaga joojiyeen shaqada DP World, sidaas ayay kaga gaabsadeen.
2008 dawladii wadanka yaman ka talinaysay ee uu hogaaminayay Madaxwayne Cali Cabdalle Saalah ayaa heshiis 30 sano ah lagashay hay’adda DP World oo ku saabsan horumarinta iyo balaarinta dekada nasiib daro afar sano kadib August 2012, Hay’adda Maamusha Dekadaha wadanka Yeman ayaa Dawlada imaaraatka waxay ugudbisay cabasho ka dhan ah shirkada DP World sidaas darteedna ay ka baxayaan heeshiiskii ay kula jireen. isla wakhtigaas baaritaan ay sameeyeen gudiga ka hortaga musuq-maasuqa ee dalka yaman iyo wasiirka dekadaha oo xligaas ahaa Waed Abdullah Bathib ayaa xildhibaanada dalka Yeman ugidbiyay in DP World ay jabisay wixii lagu heshiyay sido kelna ay musuq baahsan ku kacday. Wasiir Waed Abdullah Bathib ayaa sheegay in ay DP World kula heshiiyeen balaarinta muga dekada oo xilgaas ahaa 500,000 oo kunteynar lana gaarsiiyo 900,000 sanadkiiba. Wuxuu sheegay in DP World ay dekadaha Yeman curyaamisay si aysan ula tartamin kuwa dalkooda halkii aan ka rajaynaynay horumar iyo balaarin taasna ay cadayn u ah in dekadu hoos udhaca xad-dhaafka ah ee ku yimi dekada tan iyo markii ay DP World la wareegtay maamulka dekadaha Yeman. Tusaale sanadkii ay lawreegtay dekadaha waxaa ku soo xiran jiray 500,000 sanadkiiba balse sanadii 2011 waxaa yimi 130,000 oo kuntaynar halka sanadkii 2012 ay gaareen 212,000 oo kunteynar, meeshii laga rajaynaynay inay gaarsiiyaan 900,000 oo kunteynar. ugu danbayntii DP World waxay go’aansatay inay wareejiso dekadihii ay maamulaysay ee dalka Yeman.
Haddaba ummada soomaaliyeed wax dan ah uguma jirto soo dhawaynta iyo qancinta Dawlada Imaaraatka maxaa yeelay Imaaraatku raali kama ahaan in la helo Dawlad Soomaaliyeed oo cagaheeda ku taagan taasna waxaa cadayn u ah siduu maalinba gobol ugu yeerayo hub iyo heshiis qarsoodi ahna uga saxiixanayo. sidaas awgeed waxaa haboon in aqoon yahanka soomaaliyeed oo dhan ay qalinka ku taageeraan go’aanka maanta uu qaatay baarlamaanka Soomaaliyeed, melena la iska dhigo khilaafaadka ka dhexeeyo siyaasiyiinta.
WQ Sharmarke Cabdullahi Cali: Waa bare sare oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamcada Bosaaso, kuna takhasusay Cilmiga Ganacsiga caalamiga ah kana gaaray darajada labaad ee heer jaamcaded (Master degree). Wuxuu wax kusoo bartay wadamada Turkiga iyo Uganda. sidoo kale wuxuu qoraa qoray buugga Gundhigga Xisaabaadka Ganacsiga oo dhawaan lagu soo bandhigay magaaloyinka Ankara, Garowe iyo Bosaaso.
Qormooyinka Daljir 59 Wararka 21748